အီရန်တီး၏ အင်တာဗျူး မြန်မာပြန်။
1. You grew up working in bronze casting with your father and later studied sculpture at the National Uni- versity of Art and Culture, Yangon. Could you talk about the art education you received in the late 1990s? How were you exposed to contemporary art?
ငယ်ငယ်က မိရိုးဖလာပန်းပုကို အလုပ်သင်အနေနဲ့သင်ယူခဲ့တဲ့အတွက် Traditional art အခြေခံတွေရခဲ့တယ်၊ အဲဒီအချိန်က ပြင်ပဗဟုသုတသိပ်မရှိခဲ့ဘူး၊ နိုင်ငံကဆိုရှယ်လစ် တံခါးပိတ်ဝါဒမို့စာအုပ်စာတမ်းလည်းရှားတယ်၊ ၁၉၉၃ မှာ အစိုးရပန်းချီကျောင်းဆင်းပီး ၁၉၉၄ မှာ ရန်ကုန်အနုပညာတက္ကသိုလ်ကို တက်ဖြစ်တယ်၊ တက္ကသိုလ်ရဲ့အမည်က ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်တဲ့၊ စစ်အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ၊ သင်ရိုးအများစုက ပန်းချီပန်းပုကျောင်းတွေက သင်ရိုးတွေကိုယူထားတာ။ ကျောင်းမှာသင်တာက ၁၉ ရာစုအခြေခံပန်းချီ စနစ်တွဖြစ်ပီး အများစု ကိုးကားသင်ယူကကတာက မိရိုးဖလာနည်းလမ်းတွေပါ။ ကမ္ဘာ့ Art history ကိုစနစ်တကျစူးစမ်းမှုမရှိခဲ့သလို အနုပညာကို Intellectual အခြေခံပီးတည်ဆောက်ပုံမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါ။ အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပုံစံ ယဉ်ကျေးမှုပေါ်လစီအောက်မှာ အနုပညာဆိုတာ အမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိမာန်ရဲ့သရုပ်ကိုဖေါ်ညွှန်းဖို့နဲ့ မိရိုးဖလာ ရှိပီးသားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ ခေတ်မီတဲ့ အနုပညာ Ideology, Theories တွေကို မပျိုးထောင်ပေးနိုင်သေးတာေတွ့ရပါတယ်။
၁၉၉၈ မှာ ပန်းပုမေဂျာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပီး ၂၀၀၁ အထိ အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာပဲ နည်းပြဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ မှာ အလုပ်ထွက်ခဲ့ပီး Freelance artist အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တယ်၊ ၂၀၁၀ မှာ ဖုကုအိုကအနုပညာပြတိုက် Artist Residency program အတွက်ရွေးချယ်ခံရပီး ဂျပန်မှာ(၃)နေထိုင်ခွင့်ရလို့ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုစတင်ထိေတွ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းဟာ ပြင်ပ trend တွေနဲ့ နောက်ကျကျန်နေပီလို့ စတင်သိလာပါတယ်။
2. How did you keep your art practice going asayoung artist after graduation? What were the exhibition opportunities available in the early 2000s? And did you have to take on additional jobs to makealiving?
ဘွဲ့ရပြီးချိန်မှာ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်၊ ပြပွဲတစ်ခုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်မှာပန်းချီလက်ရာတွေရှိရင်တောင် ပြခန်းငှားရမ်းခ၊ ပြင်ဆင်စရိတ်တွေကြီးမားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွက်က ကျောင်းမပြီးခင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ထဲက တစ်ကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကလည်းမိတ်ဆွေဆရာတွေရဲ့ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့်ပါ။ တစ်ကယ်တော့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင် ပန်းချီကျောင်းဆင်းပြီးထဲက အနုပညာပြပွဲတွေနဲ့ထိတွေ့နေပါပြီ။ ပန်းချီကျောင်းဆင်းအများစုဟာ အစိုးရဌာနတွေမှာဝန်ထမ်းလုပ်ရင်လုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြင်ပမှာစာနယ်ဇင်းသရုပ်ဖေါ်ဆရာတို့၊ အရောင်းပြခန်းတင်ပန်းချီဆရာတို့ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘွဲ့မရခင်ထဲက အနုပညာလောကထဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကလောကနတ်ပြခန်းမှာ ပြပွဲလုပ်ဖို့အိမ်မက်ကတော့ မန္တလေးမှာထဲက ရှိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်မှာ လောကနတ်ပြခန်းဟာ ထင်ရှားပါတယ်၊ ပြပွဲတွေလုပ်နိုင်ဖို့ chance ဆိုတာ commercial gallery တွေမှာအဖွဲ့ဝင်ပြီး သွားတင်ရတဲ့ အရောင်းပြပွဲသာရှိပါတယ်။ အနုပညာပြပွဲဆိုတာထက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာသံတမံတွေရဲ့ souvinor ဆန်ဆန် ဝယ်ယူမှုကိုဦးတည်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဒီလိုသံတမံကြိုက်ပန်းချီကနေ ဖေါက်ထွက်တဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ စတင်နေပါပြီ၊ မော်ဒန်အနုပညာတွေ၊ ပါဖောမင့်အနုပညာတွေ စမ်းသပ်လုပ်နေကြပါပြီ၊ အများစုက နိုင်ငံရေးတော်လှန်မှုပုံစံပါ။
မော်ဒန်အတ်ပြပွဲတစ်ချို့ကို ပြင်ပအနုပညာလေ့လာသူ(Sealf-taught artist) တွေပြသလာကြပေမယ့် ပြခန်းတွေမှာ မော်ဒန်အတ်ဟာနေရာသိပ်မရသေးသလို အနုပညာကိုသီးသန့်(no selling purpose) ပြဖို့ ဆိုတာလည်း ရှားပါးနေဆဲအချိန်ခါပါ။ ဆရာ ဦးခင်မောင်ရင်၊ ဗဂျီအောင်စိုး တို့ပါဝင်တဲ့ AI group ရဲ့ မော်ဒန်အနုပညာတွေနဲ့ ဦးခင်မောင်ဘဏ်၊ပေါ်ဦးသက်၊ ဦးဝင်းဖေ တို့ရဲ့မော်ဒန်စတိုင် ပန်းချီတွေ လွှမ်းမိုးအားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လို ဘွဲ့ရပြီးအနုပညာလောကမှာ ကြိုးစားနေဆဲလူအဖို့ ရန်ကုန်ဟာ နေစရိတ်ကြီးပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် Additional job တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Computer Graphic Graphic design ကို စတင်သင်ယူ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အခြားအလုပ်ကိုင်(ပရိုဖက်ရှင်)ဖြစ်သွားပေမယ့် ပြင်ပအနုပညာပြပွဲတွေနဲ့အမြဲထိတွေ့သင်ယူပါတယ်၊ ရသမျှစာအုပ်စာတမ်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
3. How did you end up doing curatorial research and work? Was it out of necessity? Were there any peers or mentors who offered support and guidance?
အဲဒီအချိန်က စပြီး ပြင်ပဖေါက်ထွက်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး မော်ဒန်အတ်၊ ပါဖောမင့်အတ်နဲ့ အင်စတော်လေးရှင်းပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှက စီးဝင်လာတဲ့ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ သတင်းတွေ၊ လာရောက်ဖြန့်ဝေသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိလာခဲ့ပြီး၊ ပြည်တွင်းမှာ ကွဲပြားဆန်းသစ်တဲ့အနုပညာပွဲတွေလုပ်ဖို့ စတင်စိတ်ကူးလာမိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြည်တွင်းရဲ့ အနုပညာလောကအခြေနေဟာ မော်ဒန်အနုပညာအိုင်ဒီယာတွေနဲ့ စီပွားရေးပြခန်းကအပြင်ဆင်တွေက လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးမရောက်ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၁ မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘန်ဂလောမြို့က ပါဖောမင့်ပွဲတော်တစ်ခုမှာ ကျနော်ပါဝင်ခွင့်ရပြီး အဲဒီကအနုပညာဆန်းန် ကိုလေ့လာခွင့်ရပြီးတော့ မိမိတို့နိုင်ငံမှာ အနုပညာအချက်လက် အလွန်အားနည်းနေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရတဲ့အတွက် ပထမဆုံး ဗီဒီယိုအနုပညာမဂ္ဂဇင်းကို စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ပထမဆုံး အနုပညာပွဲစီစဉ်ခြင်း(Curatorial research program) အခြေခံသဘော ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့သင်ယူနိုင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ မှာ Centre for Curatorial Study (CCS)Berd Hassel Museum မှာ လေ့လာသူအနေနဲ့ တက်ခွင့်ရခြင်းနဲ့ ၂၀၁၆ မှာ Japan Foundation Asia center ကကျင်းပတဲ့ Curatorial workshop ကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာပါ။
4. In 2014, you receivedasix-month residency grant from Asian Cultural Council to research and create new work in New York. What was your experience? And were there any insights that you brought back to Myanmar?
ကျနော်တို့တစ်လျှောက်လုံး အနုပညာဖန်တီးမှုတွေမှာ ကြည့်သူရဲ့ရပ်တည်မှုနဲ့ ဖန်တီသူရဲ့ရပ်တည်မှုမှာ ကြားခံ(craftsmanship skill) ဟာ အတာဆီးတစ်ခုလို ပိုင်းခြားထားပြီး ဖန်တီးသူရဲ့ရပ်တည်မှုကို တရားသေသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နယူးယောက်အပါအဝင် လက်ရှိနိုင်ငံတစ်ကာခေတ်ပြိုင်အနုပညာတွေမှာက ကြည့်သူနဲ့ဖန်တီးသူရဲ့ကြားက အတားအဆီးဟာ ယခင်လိုမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါ့အပြင် ကြည့်သူဟာ တစ်ခါတစ်ရံ အနုပညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဖန်တီးသူဟာ ယခင်ခေတ်ကလို ပညာရပ်တစ်ခုအပေါ်မှာ ပုံသေရပ်တည်ပြုလုပ်နေသူမဟုတ်တော့ပဲ အခြားသော(ပုံသေမဟုတ်တဲ့)နေရာအစုံကနေ ဖန်တီးလာကြတာကို တွေ့ရပတယ်။ နယူးယောက်ခ်မှာ Exhibition တစ်ခုအပါအဝင် လေ့လာမှုတွေများစွာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (၆)လကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ကြုံတွေက မြန်မာပြည်မှာ Social, political အားဖြင့် ပိုမိုလင်းပွင့်မှုတွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြန်လည်မျှဝေဖို့ရာမှာတော့ အခက်တွေများစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ယခင်လုပ်နေတဲ့ပန်းချီဟန်တွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီး အခြားသောအသစ်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။
5. Two important projects you curated are ‘An Introduction to Contemporary Art in Myanmar’ (2013) and ‘Silence is Golden: Myanmar Art After Political Changes’ (2019). Both are publications that survey artists across generations and working in different media. I’ve noticed that there isn’t an artist who appears in both projects. Was itaconscious decision to have an entirely different group? Do you observe any trends, shared concerns or approaches used across both sets of artists?
မေးခွန်းမှာမေးထားသလို အစီစဉ်နှစ်ခုမှာ မတူတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကိုဟိုက်လိုက်လုပ်ချင်လို့ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ တစ်ကယ်တော့ ဒါဟာ ဒီအစီစဉ်ရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ဟာ ပြတိုက်၊ ပြခန်းနတွကလုပ်တဲ့ အနုပညာ promotion ပုံစံနဲလဲဆင်တူပမေယ့် ပထမအကြိမ်ပါဝင်ပြီးသူထဲက (စိတ်ဝင်စားတဲ့လက်ရာအသစ်တွေရှိနေပေမယ့်) မျိုးဆက်သစ် အနုပညာရှင်တွေကိုပဲ ဦးစားပေး ဖြစ်ပါတယ်။... ဒါ့အပြင် ပထမအကြိမ်နဲ့ ဒုတိယအစီစဉ်ဟာ ပုံစံကွဲပြားပါတယ်၊ ပထမအကွိမ်ဟာ အနုပညာရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းနဲ့ မီဒီယံအမျိုးစား၊ လက်ရာပုံစံကွဲပားတာကို ဦးစားပေးထားပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ လက်ရာတွေပေါ်ကနေ နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာပုံစံကို ဖေါ်ပြဖို့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးစီရဲ့ ရှုထောင့်တွေကို ခေတ်နဲ့ ချတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစီစဉ်နှစ်ခုလုံးမှာ အနုပညာရှင်တွေဟာ အခမဲ့ ဖြေကြားပါဝင်ပေးခဲ့တာမို့ အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ AURA မဲခေါင် အနုပညာဖောင်ဒေးရှင်းက ကတ်တေလောက်ပြုစုထုတ်ဝေဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာအခင်းကျင်းဟာ Individualist များပါတယ်၊ စုစည်းသုံးသပ်နိုင်ဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်။ အားလုံးခြုံပြောရရင် အခု Project ဟာ ကျန်တော့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်သုနတသနလည်းဖြစ်သလို၊ local scene ကို shaping လုပ်ထားတဲ့ Collective work တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
6. Speaking about artist collectives and spaces, the Myanmar’s first artist collective, Gangaw Village Group, was established in 1979. Aung Myint and some of Gangaw Village members started Inya Gallery in 1989, it was one of the few alternative art spaces for contemporary practices. A more recent example might be Aye Ko and the New Zero Art Space. Are there local artist groups and spaces that excite you today? In what ways are they connected to these groups that came before?
7. SOCA (School of Contemporary Art) is an online learning programme you started in 2015 asaresponse to the lack of resources on contemporary art in Myanmar. Could you talk about the content available in SOCA and the audience it is meant for? What function(s) does SOCA space/ gallery serve? Is it an extension of the online programme? ပြည်တွင်းမှာ အနုပညာတိုးတက်မှုတစ်ချို့ရှိလာပေမယ့် ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုစနစ်တကျလေ့လာဖို့ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့စည်း၊ ပလက်ဖောင်း မရှိသေးတဲ့အတွက် online ကနေစတင်ဖို့စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ New York ကပြန်ရောက်ပြီးချိန် စတင်ခဲ့တဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Institution တစ်ခုလိုစီးပွားဖြစ်လုပ်ဖို့တော့ chance မရှိခဲ့ပါဘူး။ စတင်ချိန်မှာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ပါတယ်၊ စုပေါင်းပါဖောမင့်လေးပွဲလေးတစ်ခုနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ Facebook page တစ်ခုမှာ ပရိုဂရမ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ SOCA ပရောဂျက်ဟာ လူငယ်တွေ Contemporary Art ကိုပိုစိတ်ဝင်စားပြီး သိရှိလာဖို့၊ အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေလွတ်ကင်းပြီး လမ်းသစ်ဖေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။
SOCA program မှာ လက်ရှိခေတ်အနုပညာရှင်တွေ ပြပွဲတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်အတွေ့ကြုံတွေကိုအခြေခံပါတယ်၊ သင်ကြားမှုမှာ Art21 series တွေနဲ့ education guide တွေကိုမှီငြမ်းပါတယ်။အဲဒီမှာ ပထမဆုံးသိလာတာက ပြည်တွင်းလူငယ်တွေဟာ ဘာပံ့ပိုးမှုမှမရတဲ့အတွက် အနုပညာအသစ်ဆန်းကိုချဉ်းကပ်ဖို့လက်နှေးသလို စွန့်စားရမှာမျိုးကို မလုပ်ချင်ကြပါဘူး၊ မြင်ဖူးသမျှတွေကိုထပ်ပြန်တလဲအားပေးရင်း အစိုးရပညာရေးမှာသင်ယူခဲ့သလောက်နဲ့ရပ်တန့်ပြီး အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲ တာစူကြပါတယ်။ အများစုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ပညာရေးဟာ အခြေခံ Foundation ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့သလို အနုပညာကို အမြင်ပသာဓကနေကျော်ပြီး အခြားမျက်နှာဖက်တွေကိုမကြည့်နိုင်သေးပါဘူး၊ တစ်ဖန် နိုင်ငံရေးဖွင့်ထုတ်မှုဆန်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ လူအခွင့်ရေး စတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရောစွက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကာလရဲ့ဂယက်တွေပါပဲ။
SOCA အစီစဉ်တွေမှာတော့ current art trend တွေ၊ ဒီခေတ်အနုပညာတွေမှာပြောတဲ့ အကြောင်းရာတွေကို နားလည်ဖို့ဦးစားပေးပါတယ်။ physical space အနေနဲ့ 2018 ထဲမှာ အခန်းတစ်ခု ငှားရမ်းခဲ့ပြီး Workshop, seminar, exhibitions တစ်ချို့ကိုစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Sound Art, Media Art စတဲ့ အတွေ့ကြုံသစ်တွေကို ပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ဖလှယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ space ဟာ Online program နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကို အတိုင်းတာတစ်ခုထိပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘက်ဂျက်အခက်ခဲကြောင့် ၂၀၁၉ မှာရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ 2020 မှာ “What the way we Live in social distancing” အမည်နဲ့ online program အမှတ်(၄)ကို (ကိုဗစ်၁၉)ကာလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
8. Are your curatorial work and personal artistic practice connected? What are the challenges or problems you faced managing both roles? Curatorial အလုပ်ကိုနားမလည်ခင်က သီးခြားဘဝနှစ်ခုလိုထင်ခဲ့ပေမယ့် တဖြည့်ဖြည်းနားလည်လာချိန်မှာ အနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့အတူတူပဲဆိုတာ သိလာပါတယ်။ Artwork တစ်ခုလုပ်ဖို့ တာဝန်ယူမှုတစ်ခုလိုအပ်သလို အဲဒါကိုတင်ပြဖို့အလုပ်ဟာလည်း တာဝန်ယူမှုရှိရပါတယ်။ အနုပညာတစ်ခုဖန်တီးဖို့ မီဒီယံ(အရာဝတ္ထုပစ္စည်း)တွေလိုအပ်သလို၊ ပြပွဲတစ်ခုစီစဉ်ဖို့ အနုပညာလက်ရာတွေ(သို့မဟုတ်)အနုပညာရှင်တွေဟာ မီဒီယံသဘောမျိုးပါ။ အဲဒီမီဒီယံတွေကို စီစဉ်နေရာချဖို့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလိုပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ဟာ Curator တစ်ယောက်ရဲ့ Art creation တစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်တစ်ချို့ဟာ လူမှုရေးကဏ္ဍကို ကိုင်တွယ်ဖန်တီးလာကြတဲ့အခါ society(လူတွေ) ဟာ သူ့ရဲ့မီဒီယံဖြစ်လာသလိုပါပဲ။ ဒါဟာ curatorial နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ အဲဒီလို လူမှုကဏ္ဍကို ကိုင်တွယ်ဖန်တီးဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် မိမိရဲ့အနုပညာရှင်ဘဝ အပြောင်းလဲတစ်ချို့တော့ ရှိလာပါတယ်။ ဥပမာ Artworks product သိပ်မရှိတဲ့အတွက် personal Identity ဝေ၀ါးလာသလို၊ အသစ်ရှာဖွေခြင်းတွေများတဲ့အတွက် professional life မှာအားနည်းလာပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အနုပညာစနစ်မှာ curatorial or Art management စနစ်သေချာမရှိ၊ ပံ့ပိုးမှုမရှိတဲ့အတွက် အလုပ်ရပ်တည်မှုမှာခက်ခဲပါတယ်။
9. Your latest performance ‘A Book of Institution Republic of the Union of Artopia, 2019’ involves adding the audience’s blood onto carved marble tablets. Could you talk about the idea behind this work? What were interesting responses to the performance?
စာအုပ်(Book form)နဲ့ Artwork (3) ခု ကျနော်ဖန်တီးဖူးပါတယ်၊ ပထမတစ်ခုက နယူးယောက်မှာ Open studio လုပ်ခဲ့စဉ်ကတစ်ခုနဲ့၊ ရန်ကုန် Myanm/art space မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ “The Segments” ပြပွဲမှာတစ်ကြိမ်ပါ။ အခုမေးတဲ့ A book of institution of the Union of Artopia” ပါဖောမင့်က ကျနော့်ရဲ့ “Consciousness of realities” solo ပြပွဲဖွင့်ပွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကို refer လုပ်ထားတာပါ။ ဒီအခြေခံဥပဒေဟာ မတရားမှုတွေ ဘက်လိုက်မှုတွေ အမြတ်ထုတ်ကာကွယ်မှုတွေ များစွာပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလက်ရာမှာတော့ နိုင်ငံရဲ့(အတ္တအခြေပြုတဲ့)အနုပညာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကြီးကို ဝေဖန်ထားတာပါ။ လက်ရာရဲ့ဖေါ်ပြချက်မှာ ..“ စာအုပ်မျက်နှာပြင်က မျိုးစပ်ချေးပိုးထိုးကောင်ပုံတွေ ဟာ လက်ရှိနို်င်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်အသွင်သဏ္ဍာန်အရောကြားက နှစ်မျိုးစပ်ရှင်သန် နေသူများကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ကိုက်စားဖျက်စီးခြင်းကို သတိမူခြင်း မရှိတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်နေကြတာတွေရှိလာပါတယ်။ လူသားဟာ အတ္တဗဟိုပြုအခြေခံ စိတ်ညွတ်တိမ်းမှုတွေကိုလွန်ဆန်နိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်၊ တစ်ဖန် အယူသီးလွန်းခြင်း၊ ရိုးအခြင်းနဲ့ အလွန်မင်းတပ်မက်စွဲလမ်းမှုတွေက လူမှုအသိုင်းဝိုင်းကနေမကျွတ်လွတ်ဘဲ သက်ရှိရုပ် သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ ဘဝသစ်တစ်ဖန်ကျင်လည်နေကြပါတယ်။ ပဒေသရာဇ်စိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေ ရဲ့ ဂုဏ်ပကာသနနဲ့ တလွဲဝါဒအစွန်းရောက်မ ှုတွေအတွက် ပြည်သူရဲ့သွေးတွေရောနှော ဖြည့်သွင်းအသက်ဆက်ပေးကြရတယ်”…. လို့ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
10. In your essay ‘Changes and Uncertainties in Contemporary Myanmar Art’ (2017), you brought up several issues hindering the development of the Myanmar contemporary art, such as the lack of professional curators as well as divisions between artists who studied locally and abroad. What your thoughts on the situation since the essay is published? အဲဒီကာလရဲ့ အခြေနေမှာ Art scene တစ်ခုအနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့ Scholor ပညာတတ်အလွန်နည်းပါးခြင်းဟာ အဓိကပြောလိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ပြည်ပပညာသင်လူငယ်တွေကို အရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမပေးတဲ့အတွက် လူငယ်အများစုက Outsider တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီး ဆန့်ကျင်ခွဲထွက်သွားဖို့ဆီကိုတွန်းပို့နေတာပါ။ အစိုးရဟာ အခြားကဏ္ဍတွေပြုပြင်ဖို့တာစူနေပေမယ့် အနုပညာကဏ္ဍမှာ အလွန်လက်နှေးဆဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ကစရမယ်မှန်းမသိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနုပညာကိုအပျော်သက်သက်(သို့မဟုတ်)၀ါဒဖြန့်ဖို့လောက်သာနားလည်သူတွေများပါတယ်။ အစိုးရပံ့ပိုးမှုမရှိလို့ အနုပညာတိုးတက်မှုမရှိသလား၊ အနုပညာအသစ်တိုးတက်မှုမရှိလို့ အစိုးရပံ့ပိုးမှုတွေမရှိတာလား စဉ်းစားစရာပါ။လက်တွေ့မှာလည်း နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အုံတွေ၊ ဌာနတွေနဲ့ အခွင့်လမ်းတွေဟာ ယခင်အာဏာရှင်လက်ဝေခံတွေရဲ့စီပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေတဲ့အတွက် ထိလို့ကိုင်လို့မရနိုင်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချို့သောအခြေခံပေါ်လစီတွေဟာ လုံးလုံးပြောင်းလဲပြစ်မှ ဖြစ်မယ့်အနေထားရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် (ပြည်ပသရုပ်ပျက်ယဉ်ကျေးမှုများကို တာဆီးကာကွယ်ရမည်) ဆိုတဲ့အချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ် (သရုပ်ပျက်ဆိုတာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လဲမသိပါ)၊ နိုင်ငံတကာ အနုပညာဖလှယ်မှုတွေအလွန်နည်းပါးရခြင်းဟာ အဲဒီအချက်ပါပဲ။ ဒီအခြေနေကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့ ပညာရပ်အခန်းကဏ္ဍ ရှေ့ရောက်လာဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာပညာသင်သူဖြစ်စေ ပြည်ပမှာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်စေ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပ အခြေခံအတွေးခေါ်မတူညီတာကို ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ စဉ်းစားနိုင်ဖို့ ထည့်ပြောဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
11. You ended the essay withaword of caution to Myanmar artists about international organisa- tions who have recently taken an interest in the local art scene, saying: “... artists need to make wise decisions by weighing up their options. They need to examine who is benefitting and how. They also need to work to change the policies regarding art and culture.” What are the considerations you make personally when collaborating with external organisations? And what are the cultural policies in Myanmar that need to be changed?
လက်ရှိယဉ်ကျေးမှုပေါ်လစီက ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအာဘော်ဖြစ်ပါတယ်၊ ရိုးရာအမွေနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အလေးပေးထားပေမယ့် Centralization ဖြစ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ ဇာတိမာန် ဆိုတာတွေကို ဟိုက်လိုက်လုပ်ထားတဲ့အတွက် လူမျိုးဇာတိအလွန်များပြားပေါင်းစည်းနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အားနည်းချက်တွေများစွာဖြစ်နေတာပါ။ ပဒေသရာဇ်ဆန်တဲ့ Patriotism ကိုလူမှုရေးမှာ ၀ါဒဖြန့်ပေးထားတဲ့အတွက် Multiculturalism လက်မခံအားမပေးတာထင်ရှားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို သိမြင်နားလည်ခြင်းဟာ ကျဉ်းမြောင်းနေတဲ့အတွက် ပညာရေးလူမှုရေးမှာတိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးစေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့လက်ရှိအချိန်ထိ ယခင်အာဏာရှင်ပုံစံကျ ပြုစုထားတဲ့စနစ်တွေကိုလက်ခံလုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ွွပြည်ပအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်စင်တယ၊ ဂိုသဲအင်စတီကျူနဲ့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့လို အဖွဲ့စည်းတွေဟာ မြန်မာအနုပညာကို တဖက်တစ်လမ်းက ကူညီခဲ့တာ ကာလများစွာရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာအခန်းကဏ္ဍဟာ မကျယ်ပြန့်သလို အထက်မှာဖြေခဲ့သလိုပဲ ပေါ်လစီအတားဆီးတွေကြောင့် ပြည်ပ(ဒီပလိုမေစီ)ဆက်ဆံမှုမှာ အလွန်အားနည်းပါတယ်။ ပြည်ပအနုပညာဖလှယ်မှုတွေ၊ ရလဒ် နည်းလမ်း စနစ်ကျတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေနွေးပွဲတွေ အလွန်နည်းပါးပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ပြည်တွင်းရဲ့ ကန့်သတ်မှုအမျိုးမျိုးတွေဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာ အတားဆီးတွေဖြစ်လာပြီး အနုပညာကျယ်ပြန့်မှုတွေကို လူတိုင်းဆီမရောက်ပဲ အကန့်သတ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါဟာ လူမှုအသိုင်းဝိုင်းရဲ့ အနုပညာတိုးတက်မှုကိုပါ ဟန့်တားထားသလိုဖြစ်နေပြီး ဘက်ညီမျှတမှုတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေနေမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နောင် အနုပညာပွဲတွေဟာ ချိန်ညှိမှုတွေရှိလာဖို့လိုကြေင်း ထည့်ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
(optional question) 12. Are there any upcoming projects or exhibitions you’d like to share?